'Wixineen ashuuraa eksaayisii fooyya'e gatii konkolaataa ni hir'isa' jedhan Dr Iyyob Takkaalliny - BBC News Afaan Oromoo
'Wixineen ashuuraa eksaayisii fooyya'e gatii konkolaataa ni hir'isa' jedhan Dr Iyyob Takkaalliny
"Shaqaxoota bu'uuraa irratti ashuuraan kaa'ameera jechuun burjaajin gabaarratti uumame sirrii miti" jedhan di'eetaan ministiraa maallaqaa Dr Iyyob Takkaalliny.
Dhimma wixinee ashuuraa eksaayisii dhiyeenya kana fooyya'ee mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaate irratti har'a ibsa kan laatan Dr Iyyob Takkaaliny "immaammata mootummaan konkolaattota walin walqabatee hojiirra oolchuf jedhu irrattis burjaajin jira" jedhan.
Omishaalee akka sukkaara, ashaboo fi zayita irratti ashuuraan haaraan akka kaffalamu mootummaan murteessera jechuun namootni tokko tokko omishaalee kunneen irratti gatii dabaluu isaanii himan.
"Kuni gonkumaa dogongora. Ashuuraan haaraan omishaalee kunnen irratti dabalame hin jiru," kan jedhan Dr Iyyoob sirumayyuu omishaalee kunneen irratti fooyya'iinsi ashuuraa taasifamuu himan.
"Ashuuraan eksaayisii sukkaaraaf kaffalamaa ture dhibbeentaa 33 gara 20ti hir'ateera," jedhan.
Ashaboo irrattis bifa wal fakkaatun ashuuraan haaraan akka hin kaayamne dubbatan.
"Zayita soorataa irrattis wanti jijjiirame hin jiru" kan jedhan di'eetaan ministiraa maallaqaa Dr. Iyyob ,haa ta'u malee gosoota zayitaa soorataaf osoo hin taanee indaastriiwwan garaagaraaf oolan fi hammeentaa faatii olaanaa qaban irratti ashuuraan eksaayisii kaa'amuu isaa himan.
"Imaammata konkolaataan walqabatee mootummaan konkolaataa irratti ashuuraa eksaayisii guddaa kaffalchiisun galii heddu sassaabuu barbaadeti kan jedhus imaammaticha hubachuu dhiisurraa kan dhufedha" jedhan Dr Iyyoob..
"Biyyattin iddoo konkolaataawwan moofaa itti gataman taatee turteerti" kan jedhan di'eetaan ministiraa kun konkolaataawwan moofaa biyyaalee birootii bitamanii dhufanis indaastriin omisha konkolaataa akka hin guddanne taasisuun dabalataan boba'aa fi suupaadhaaf baasii olaanaa kan gaafatan akka ta'an himan.
Konkolaataawwan kunnen diinagdee biyyattii irratti miidhaa geessisaa akka turanis dubbatan.
Kanaafis wixineen haaraa indaastrii omisha konkolataawwan haaraa biyya keessaa akka jajjabeessu himan.
Namootni konkolaataawwan moofaa fichisiisaa turanis imaammata kana hubachuun damee omisha konkolaataa irratti fedhii agarsiisaa jiru jedhan.
"Wixinee haaraa kanaan konkolaataawwan haaraa CC isaanii 1,300 gadi ta'an ashuuraan eksaayisii kan kana dura irratti kaffalamaa turerraa dhibbeentaa 83 gadi akka hir'ifamu taasifameera" jedhan.
Haaluma kanaan hammeentaan ashuuraa eksaayisii konkolaataa kunneenif kaffalamu dhibbeentaa 35 gara 5% akka gadi bu'u taasifamuu isaa himan.
Gama biraatin gaafii konkolaataa moofaa kan jedhamu wagga meeqa kan tajaajile ykn yoom omishamedha jedhuf "kun labsiidhaan osoo hin taanee dhimma qajeelfamaan murtaa'udha" jedhan.
Dhimma dhugaatii alkoolii biiraa fi tamboon walqabatee yaadawwan garaagaraa ka'aa akka turan kan himan Dr Iyyob, isaan keessaa inni tokko "hammeentaan ashuuraa eksaayisii biiraa irratti murtaa'e ni xiqqaata" kan jedhu akka ta'e himan.
Dhugaatii alkoolii biiraa irratti daballin ashuuraa eksaayisii taasifamuu isaa kan himan Dr Iyyob dhaabbileen dhugaatii alkoolii omishan hojjettoota heddu kan qaban waan ta'ef haala diinagdee biyyattii miidhuu hin dandeenyen fi indaastricha hin kuffisneen suuta dabalaa akka deemmamu himan.
Dhaabbanni Maallaqa Addunyaa dinagdeen Itoophiyaa fooyyee agarsiisuuf jedhe